Senator Faroole oo eedeyn usoo Jeediyay Wasiir Xoosh “Ninkaas waa in Maxkamad lasoo taagaa”. | Wararka Jubbaland
Senator Faroole oo eedeyn usoo Jeediyay Wasiir Xoosh “Ninkaas waa in Maxkamad lasoo taagaa”.
Senator Cabdiraxmaan Faroole oo kamid ah Xubnaha Aqalka Sare Barlamaanka Soomaaliya, ayaa si faah faahsan uga hadlay marxaladihii uu soo maray Dastuurka dowladda Federaalka Somalia, xilli magaalada Garowe uu joogo wafdi kasocda dowladda dhexe oo wada qorshayaal ku aadan dib u eegis lagu sameeyo Dastuurka dalka.
Farole, ayaa sheegay in dastuurkan lagu saxiixay magaalada Nairobi kuwaasoo ay qalinka ku duugeen lix saxiixe oo kasocday dowladda dhexe, Puntland, Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca, kaasoo damaanad qaade ka ahaa Wakiilkii markaas u joogay Qaramada Midoobay Somalia Augustine Philip Mahiga.
Dastuurka oo Wasiir Xoosh tilmaamay inaan waxba laga farogalin ayuu Farole ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin isagoo xusay in qodobo badan faraha la galiyay oo sidii loo saxiixay qaab ka badalan loo gudbiyay, taasoo uu xusay inay ka sameeyeen qoraalo tiro badan.